HTC Ọpụpụ 1s: Ekwentị New Blockchain Ekwentị | Gam akporosis
Otu afọ gara aga, HTC Ọpụpụ malitere na ahịa, ika ika mbu ahia. Ihe nlere nke ika ahu batara na ahia ohuru ma enwere ike zuta ya na Bitcoin. Ọ dị ka onye na-emepụta Taiwan nwere obi ụtọ na nsonaazụ nke ihe nlereanya a nwetara n'ahịa, n'ihi na ha ji nsụgharị ọhụrụ abịa.
Ha weputara Ọpụpụ 1s, nke bụ n’ezie ụdị edezigharịrị, ma na egwu nkọwa. A dịtụ iche nzọ nke ika, nke na-adịbeghị anya ghọtara na ha kwụsịrị iche ihe ọhụrụ. Agbanyeghị na ngagharị a ọ dị ka ha agaghị agbanwe echiche a nke ukwuu.
Ekwentị nwere a Ihuenyo 5,7 nke nwere 18: 9 na mkpebi HD +. Na mgbakwunye, nke a HTC Ọpụpụ 1s na-eji Snapdragon 435 processor, nke bụ ihe ijuanya taa, ọkachasị maka ekwentị blockchain dị ka nke a. Ọ bụ ezie na ọ na-enye anyị 4 GB nke RAM na 74 GB nke nchekwa.
Maka ese foto, a na-eji azụ 13 MP na ihu 13 MP eme ihe. Mgbe anyị nwere batrị ikike 3.000 mAh na ya. Ekwenyebeghị ụdị gam akporo ahụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-ekwu maka ya site na iji gam akporo 8.1 Oreo. Nlereanya na-akụda mmụọ n’ụzọ ọ bụla, ya mere.
Na ụzọ ị nwere ike ịzụta ekwentị a enweghị ịtụnanya. Ndị nwere mmasị nwere ike ịzụta HTC Ọpụpụ 1s site na Bitcoin, na ọnụahịa nke euro 219, nke mere a ga-agbanwe n'ime ego ndị a. Nke a bụ ego nke ekwentị mbinye aka a.
Somelọ ọrụ na-ebuputa ihe dị obere. Nke a HTC Ọpụpụ 1s bụ ekwentị ọ dịghị onye na-eche, nke na-abụghị ihe ijuanya na ọ dịghị mkpa n'ezie. N'ihi ya, ọ na-aga n'ihu na ụzọ nke mgbagha nke ụlọ ọrụ siri ike, nke nwere ụdị ekwentị adịghị ka ọ ga-enwetaghachi ọnụnọ ya n'ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC na-ebupụta ekwentị ọhụụ ọhụrụ nke Ọpụpụ 1s